Siihayaha RW Mahdi Guuleed oo la kulmay Safiirka dalka Sweden u fadhiya Soomaaliya - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Siihayaha RW Mahdi Guuleed oo la kulmay Safiirka dalka Sweden u fadhiya...
Siihayaha RW Mahdi Guuleed oo la kulmay Safiirka dalka Sweden u fadhiya Soomaaliya
Siihayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed khadar ayaa Maanta xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka dowladda Sweden u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr. Staffan Tillander.
Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xariirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dowladood iyo labada shacab, iyo sii wadidda taageerada dowladda Sweden ay qaybta uga qaadato dib u dhiska Soomaaliya.
Siihayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed khaddar ayaa dowladda Sweden uga mahadceliyay taageeradeeda Soomaaliya, isagoona boggaadiyay howlaha shaqo ee Safiir Staffan Tillander.
Sweden waxa ay kamid tahay dowladaha saaxiibka dhaw la ah Soomaaliya oo waqtiga dheer qaybta ka ahaa dadaallada lagu horumarinayo dowladda Federaalka.
Previous articleMaxkamada Ciidamada Qalabka side oo xukun riday
Next articleJapan oo yeelatay Raisal Wasaare cusub